> Resource > Android > Best Android App Abaabulaha Waxaad u
Smartphone Android oo miiska kuu ogolaanaysaa inaad ciyaari barnaamijyadooda on go ah. Chine aad u badan oo ku saabsan telefoonka Android ama kiniin isdaahiriya si dhibaatooyin ka qaar ka mid ah. Tusaale ahaan, u malaynayaa in aad jeceshahay in uninstall barnaamijyadooda badan oo aan loo baahnayn, waxaad u leedahay in iyaga uninstall mid mid. Waa waqti lumis, soo maaha? Maxaa dhacaya haddii aad leedahay app qabanqaabiyaha waxtar leh Android inay kaa caawiyaan inaad u abaabulaan barnaamijyadooda? Waxa ay noqon doontaa kaamil ah.
Wondershare MobileGo for Android (Windows) waa fiican app qabanqaabiyaha Android. Haddii aad isticmaasho Mac, u leexdo xagga Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Labada nooc oo barnaamijkan ku siin awood u leeyahay in uu abaabulo barnaamijyadooda ku saabsan qalabka Android, oo ay ku jiraan ku rakibidda, uninstalling iyo dhoofinta barnaamijyadooda.
Download this app qabanqaabiyaha Android on your computer.
Fiiro gaar ah: Labada nooc oo barnaamijkan ku dhowaad qabtaan isku mid. Sidaas darteed, waxaan jeclaan lahaa in ay qaataan version Windows - Wondershare MobileGo for Android sida tusaale.
Connect telefoonka Android ama kiniin in kombiyuutarka
Bilowga, rakibi oo ay maamulaan this app qabanqaabiyaha Android on your computer. Waxaa markaas Orod. Connect telefoonka Android ama kiniin in kombiyuutarka via cable USB ama via Wi-Fi (WiFi waxaa laga heli karaa oo keliya version daaqadii). Marka waxa la ogaado, telefoonka Android ama kiniin la soo bandhigi doonaa suuqa kala hoose.
Fiiro gaar ah: Hubi suported telefoonada Android iyo kiniiniyada halkan.
Chine Download ka Resource ku Online
Tani app qabanqaabiyaha ugu wanaagsan ee Android kuu ogolaanaysaa inaad soo bixi barnaamijyadooda si fudud. Ugu column bidixda ah ee kore waa Resource ku Online, kaas oo aad ka Google Play, AppBrain soo bixi kartaa barnaamijyadooda, iyo website-yada kale ee ku daray. Riix iskutallaabta inay websites daro in Resource ku Online. Browse website iyo download ee Dalka Chine. Chine ayaa waxaa si toos ah lagala soo bixi doonaa oo lagu rakibay on telefoonka Android ama kiniin.
Ku rakib barnaamijyadooda ku saabsan telefoonka Android ama kiniin
Waxa ugu horeeya ee aad doonayso in aad qabato ka dib markii degsado barnaamijyadooda badan oo laga cabsado waa si loo soo dajiyo oo dhan oo iyaga ka mid ah in aad telefoonka Android ama kiniin. Iyada oo ay taasi soo abaabulay Android app, si fudud oo effortlessly waxa aad sameyn kartid. Guji "Apps" galeeysid ka tagay si ay u muujiyaan oo dhan barnaamijyadooda ku saabsan telefoonka Android ama kiniin on xaq. Guji "rakib". Browse your computer-ada si aad u hesho in aad rabto in aad rakibto. Guji "Open" si ay u soo dajiyo.
Dhoofinta barnaamijyadooda aad Android
Tani qabanqaabiyaha barnaamijyadooda Android sidoo kale awood aad u dhoofiso barnaamijyadooda Android si aad u computer u gurmad aan dadaal. Chine Dooro in aad doonayso in aad dhoofin. Guji "Dhoofinta" oo ay helaan meel ay ku badbaadin lahaayeen barnaamijyadooda ah.
Chine uninstall qalabka Android aad
Too barnaamijyadooda badan oo aan waxtar lahayn soo qaato oo meel aad u badan. Haddii aadan sugi karo inaan iyaga uninstall, tan ugu wanaagsan app qabanqaabiyaha Android yimaado tahay caawimada. Ka dib markii doorashada Chine in aad rabto in aad mar dambe ma ay hayn, guji "uninstall"> "Haa". Ilbidhiqsiyo gudahood, laga daadiyo, kuwaas oo laga saari doonaa. Sidaas degdeg ah!
Fiiro Gaar ah: Iyada oo Wondershare MobileGo for Android, ee Chine preinstalled qalabka Android rujin sidoo kale la uninstalled karo.
Share barnaamijyadooda Android Facebook, Twitter iyo SMS
Haddii aad soo bixi oo lagu rakibay barnaamijyadooda badan oo laga cabsado, oo aad iyaga la wadaagi karto ka mid ah saaxiibadaa iyo qoysaskooda. Hubi Chine ee aad jeceshahay in aad la wadaagto. On xaq, riix batoonka share ah. Markaas, waxaad ka heli 3 doorasho: "Share to Facebook", "Share Twitter" iyo "Share via SMS". Dooro sida aad jeceshahay in aad la wadaagto barnaamijyadooda ka.
Fiiro gaar ah: Wondershare MobileGo for Android kuu ogolaanayaa inaad la wadaagto Dalka Chine in aad downlaod iyo rakibi. Chine System looma oggola in ay wadaagaan.